I-Villa Claudina, Tela Honduras - I-Airbnb
I-Villa Claudina, Tela Honduras
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguAmparo
UAmparo ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-92% yeendwendwe zakutshanje.
Indlu engaselwandle enokwamkela abantu abayi-18 (kukho imali eyongezelelekileyo emele ibhatalwe emva kweendwendwe eziyi-13). Inepuli yabucala enebhari, iindawo zokoja inyama, izitulo zokuphumla, ii-hammock kunye nokuya ngqo elunxwemeni. Iinkonzo zokucoca nokupheka zemihla ngemihla ziqukiwe kwaye kukho ukhuseleko lweeyure eziyi-24.
INQAKU MAY-22: Inqanaba lolwandle lithetha ukuba okwangoku akukho ndawo yokufaka izitulo/iitafile eziqhelekileyo zaselwandle. Enkosi ngokuqonda ukuba asikwazi ukulawula uMama Wendalo kunye notshintsho lolwandle ngalo lonke ixesha.
Indlu engaselwandle, enekhitshi elivulekileyo nendawo yokutyela, amagumbi okuhlala ayi-2 ahlukeneyo, amagumbi okulala ayi-3 namagumbi okuhlambela ayi-4.5. Igumbi lokulala eliphambili linebhedi enkulu eyi-1, ibhedi elala abantu ababini eyi-1, ibhedi elala abantu ababini enye (iibhedi ezilala abantu ababini eziyi-2), ishawa/indlu yangasese kunye neTV. Amanye amagumbi okulala ayi-2 anebhedi enkulu eyi-1, ibhedi elala abantu ababini enye (iibhedi ezilala abantu ababini eziyi-2), ishawa/indlu yangasese kunye neTV nganye.
Ngexabiso ELONGEZELELWEYO le- $ 60 ngosuku kukho igumbi lokulala elisandul 'ukwakhiwa (2019) elinebhedi elala abantu ababini enye, ishawa / indlu yangasese yabucala, i-TV kunye ne-A/C. Unokufikelela kuyo ngaphandle kokunyuka izitepsi.
Indawo engaphandle intle ibe nepuli yabucala, ibhari, iindawo zokoja inyama, izitulo zokuphumla, ii-hammock, ithobhi, ukuya ngqo elunxwemeni neshawa.
Ibhedi enkulu eyi-1, 1 ibhedi elala abantu ababini, ibhedi ekhwele kwenye eyi-1
I-La Ensenada yintsapho encinci yaseGarifuna eHonduras. Nceda ube nobubele kwaye uhloniphe abantu basekuhlaleni, utyelela intsapho yabo ekugqibeleni!
Sinikezela ngeenkonzo zokucoca nezokupheka zemihla ngemihla, eziqukwe kwixabiso. Kukwakho nonogada kwindawo yakho iiyure eziyi-24 nomntu ophethe ukulungiswa (ipuli, ukucoca elwandle, njl.)
Ukutya akuqukwanga, siza kukunceda ucebe iimenyu zakho uze emva koko uthenge izinto zokupheka uze wazise umpheki wethu ngezinto oceba ukuzenza, ukuba kunokwenzeka ubhale.
Uza kunikwa izinto zebhedi neetawuli.
Sinikezela ngeenkonzo zokucoca nezokupheka zemihla ngemihla, eziqukwe kwixabiso. Kukwakho nonogada kwindawo yakho iiyure eziyi-24 nomntu ophethe ukulungiswa (ipuli, ukucoca elwandl…